Nhau - Vhura Musika weRussia Far East
MunaAugust 2020, bhateki rekutanga reBlack Runako doro rakaendeswa zvinobudirira kumusika weRussia Far Eastern. Seyakakurumbira bheriri bhiya reJINBOSHI yekubika doro, ino inguva yekutanga Dema Runako doro kuenda mumusika weRussia.
Munguva pfupi yapfuura, kudiwa kwemhando yepamusoro doro riri kukwira muRussia. Zvichakadaro, China yakagara ichikurudzira kuchinjana kwehupfumi neRussia Far East.
"Shamwari yekuChina yakandisundidzira kuti nditange kufunga nezvekupinza doro muRussia", akadaro Victor Loginov, mutengesi weBlack Beauty doro. "Vanhu vazhinji pano vakanyunyuta kuti yaisakwanisa kuwana doro remhando yepamusoro mudzimba, uye raive nechido chekudzidza mabikirwo ekubikisa kubva kune dzimwe nyika".
Pakupedzisira, Victor akabata JINBOSHI uye akawana kukokwa kwekushanyira doro. Kwekupedzisira Mbudzi, mushure mekushanyira JINBOSHI uye kuyedza doro redu, Victor akagutsikana nekugadzira kwedu doro uye tekinoroji.
Kunyangwe iyo yekutengesa doro isina kunaka nekuda kwecoronavirus, hwahwa hwehunyanzvi hwemhando yepamusoro hunogona kuwana musika wawo.
Patinosvika kuna Victor parunhare, anofara kutaura nezve kubikwa, uye anofara kutaura nezveramangwana redoro muRussia. Yedu hurukuro, zvakadaro, inosvika kumashure baba kupfuura - kumashure 12 mwedzi kusvika apo Victor akatanga kutaura nesu online. "Kana tikakwanisa kupinza zvimwe zvinhu zvakagadzirwa kuChina, nei tichigona kupinzawo doro reChina?" Pfungwa yaVictor yekuyedza kuendesa kuChina doro pakupedzisira rinozoita kuti riitike muna 2020 gore.
"Kutaura chokwadi, ndakaedza chinenge doro rega rega pandakaenda kuChina", akadaro Victor, “ndopedzisira ndazopedzisira ndave neBlack Beauty. Inyaya yandinonyatsokoshesa nekuti ndinowana mudiwa akanaka kuChina ”.
Chimwe chikonzero anonamira neBlack Runako: hops dzese uye mbiriso zvatakatora zvinotorwa kubva kuEurope kana America. Icho chikamu chakakosha chekubika doro rakanaka, anofunga. “Ndicho chimwe chezvinhu zvandinoda chaizvo kubhizimusi rangu redoro. Ndicho chinhu chandinonyatsokoshesa ”, Victor anodzokorora.
Post nguva: Sep-02-2020
Aluminium Inogona 355ml Yakajairwa, Sleek 310ml Aluminium Inogona, Aluminium Inogona 310ml Sleek, Aluminium Inogona 250ml Sleek, Aluminium Inogona 330ml Yakajairwa, Sleek 200ml Aluminium Inogona,